FaceApp : Sideed u ekaan kartaa 60 sanno kadib? - BBC News Somali
17 Luulyo 2019
Lahaanshaha sawirka Twitter : Mo Salah
Image caption Maxamed Saalax ayaa ka mid ah dadka caanka ah ee isticmaalay barnaamijkan
Waxaa soo baxay, Baraha Bulshadana qabsaday barnaamij cusub oo sawirrada lagu dhalan rogayo, qofkana uu sawirkiisa ka dhigi karo hadba da'da uu doono in uu isu ekeeysiiyo.
Barnaamijkan cusub oo laga soo dajisanayo internet-ka kadibna lagu shubayo taleefoonka ayaa lagu magacaabo FacebApp, kadibna waxaad galin kartaa sawirkaaga ama sawir qof kale, adiga oo xulanaya hadba sida aad doonaysid in uu kuu ekeysiiyo.
Maadaamaa baraha bulshada u badanyihiin dad dhallinyaro ah, waxa dadka inta badan ay ciwaanadooda soo dhigayaan sawirkooda oo gaboow ah ama 60 sanno hadda kadib sidii ay u ekaan karaan.
Haddaba mid ka mid ah dadka dhallinyarada isticmaalay barnaamijkan oo lagu magacaabo Tamaan Ismaaciil ayaa yiri "Waxay ila tahay in arrintan ay tahay tijaabo uu qof kasta iska qaaday bal sida uu u ekaanayo, balse uu isaga laftiisa rumeysanyahay in aysan ahayn tijaabo sax ah, kama turjumeyso qofka sida uu noqonayo marka uu weeynaado, sababtoo ah alle ayaa garanaya" .
"Waa iska tijaabo dhallinyaronimo oo maaweelo iyo qosol loogu talogalay" ayuu intaas sii raaciyay Tamaan.
"Qaar badan baa markii ay sawirkayga arkeen waxay ku dhaarteen in uu aabahay yahay" ayuu yiri Mataan Ismaaciil
Siyaabaha kale ee sawirka laga dhigo karo
Barnaamijkan waxa uu kuu saamaxayaa in aad iska dhigto qof yar, ama si ka duwan jinsiga aad tahay lab ama dhedig. Waxa uu sidoo kale kuu ogolaanayaa in aad dhalan rogto sawirka oo aad samaysato gadh, hareed, ama timod badan.
Dadka Caanka ah ee loo isticmaalay
Barnaamijkan oo caalamka aad ugu faafay si dhaqso ah ayaa sawirradooda la galiyay dad caan ah sida xiddiga kubadda cagta ee dalka Masar Maxamed Saalax iyo dad kale.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @MoSalah5_82
فخر العرب واحد بس @MoSalah 👑 pic.twitter.com/qgiNZHKDPK
— Ⓜ️.Salah (@MoSalah5_82) 13 Bisha Todobaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @MoSalah5_82
Baraha Bulshada Soomaalida waxaa aad u qabsaday sawirrada Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, iyo waliba madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kuwaas oo loo ekeysiiyay dhalinyaro.
Lahaanshaha sawirka Baraha Bulshada
Image caption Sawirrada la dhalan rogey ee madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya
Sannadkii 2017-dii ayuu markii ugu horeysay suuqa soo galay barnaamijkan, balse hadda waa uu ka casrisanyahay.
Culumada Maxamed ka qabaan?
Sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Bariga Dhexe, sheekh Cisaam Al Ruubi oo u dhashay dalka Masar ayaa sheegay in barnaamijkan uusan diin ahaan u wanaagsanyn.
Waxa uu sheegay in Alle oo kaliya uu yahay kan ogaan kara sida uu qofka u ekaanayo marka uu weeynaado, barnaamijkana uu yahay mid isku dayaya in uu bedelo suuradii dhabta ahayd.
Hindiya oo Kashmiir ka xannibtay baraha bulshada
Sheekh Maxamed Calasoow oo ka mid ah culumada Soomaaliyeed ayaa BBC u sheegay sidan "Waxyaabo la qiyaasi karo ayaa jira, balse taas qeybka kuma jiro, tusaale qofka marka uu weeynaado waxaa la qiyaasi karaa sida uu jirkiisa noqon karo, in aragga iyo maqalka uu weynayo, in uu ilko beelo, in uu soo goto ayaa dhici karta, balse qaabkan ayaad noqonaysaa ma ahan mid saxan, Allena horey ayuu uga hadlay".
"Bini'aadamkana in caqligooda lagu ciyaaro waa wax la yaab leh"ayuu yiri Sheekha oo intaas ku daray in aysan banaanayn in qofka uu isu ekeeysiiyo dumar.
Barnaamijkan cusub ayaa dadka u ekeysiin kara dumar, labeeb ama xitaa u yeeli kara astaamo kala duwan sida timo iyo gadh.
Halista kale ee ka dhalan karta
Sida uu qorey wargeyska Gulf News ee kasoo baxa Dubai, waxaa jira taxadar ay tahay in aad ka qabto adeegsiga barnaamijkan. Waxa uu wargeyska sheegayaa in marka lala soo dagayo lagu weeydiinayo ogolaansho, marka aad aqbashidna in dadka barnaamijkan sameeyay ay la dagi karaan xogo muhiim ah oo shaqsiyaddaada ku saabsan oo taleefoonka ku kaydsan, kuwaas oo hadhoow laga sii iibin karo shirkado badeecooyin soo saara.
Taas oo kaliya ma ahan, sida uu qabo Mataan , waxaa dhici karta in loo adeegsado sawirradan in la'isku qiyaamo marka ay timaado dadka haasaawaha uu ka dhaxeeyo ee ku kala nool meelaha kala fog.
"Qofka inta uu sawirkiisa badelo ayuu oran karaa waa aniga iyo sida aan hadda ahay, wuxuuna oran karaa timo ayaan leeyahay isaga oo bidaar leh, ama ma ahee, isaga oo madoow ayuu dhihi karaa sidaas ayaan u caddahay" ayuu yiri Mataan.